भारतबाट बेरोकटोक छिर्दैछन्, काठमाडौंका अस्पतालमा भरिँदैछन् – AayoMail
भारतबाट बेरोकटोक छिर्दैछन्, काठमाडौंका अस्पतालमा भरिँदैछन्
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन १८ गते २०:००
उपत्यकामा पछिल्ला दिन भेटिएका कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांश भारतबाट आएका कामदार हुन्। लकडाउन अन्त्यसँगै उनीहरु खुला सीमा हुँदै ठाउँ–ठाउँका छोटा दुरीका यातायात प्रयोग गर्दै उपत्यका छिरेका हुन्।
टेकुस्थित शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालका भाइरोलोजिस्ट डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार पछिल्ला दिनमा उपत्यकामा देखिएकामध्ये अधिकांश संक्रमित लकडाउन खुलेसँगै नेपालमा रोजगारीका लागि आएका कालीगढहरु छन्।
उनीहरु उपत्यकामा डकर्मी, प्लम्बर, कार्पेन्टर, हेयर ड्रेसर, मोवाइल मर्मतलगायतका काम गर्छन्। घरवेटीहरुले दबाब दिएपछि मात्र उनीहरु परीक्षणका लागि जाने गरेका छन्।
‘टेकु अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचारका लागि आएका बिरामीसँग कुरा गर्दा नाकामा पटक्कै निगरानी नभएको बुझिन्छ। हामीकहाँ भर्ना भएकामध्ये अहिले ३० प्रतिशत जति भारतीय छन्,’ डा बास्तोला भन्छन्, ‘यातायात नचलेको अवस्थामा उनीहरु कसरी काठमाडौं आइरहेका छन्?’
भारतीय कामदारहरुको काठमाडौं बसोबास अव्यवस्थित हुनु पनि थप समस्या हो। ‘उनीहरु संक्रमण भएको थाहा पाएपछि पनि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ला भनेर भागीभागी हिँडेको समेत पाइन्छ। यसरी महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्न,’ डा. बास्तोलाले चिन्ता व्यक्त गरे।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेले अहिले उपत्यकामा देखिएको संक्रमण भारतबाट छिरेका एवम् उनीहरुको सम्र्पकमा आएकामा केन्द्रित भएको बताए।
यो सन्दर्भमा लकडाउन दोहोर्‌याउने भन्दा सीमा तथा उपत्यकाको नाकामा सख्त कडाई गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘नाकामै स्वाव संकलन गरेर रिपोर्ट नआएसम्म छिर्नु दिनुहुन्न। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र निगरानी बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
भारतबाट मानिस तराई तथा काठमाडौंमा बेरोकटोक आइरहँदा लकडाउन खुल्नुलाई पूर्ण स्वतन्त्रता मान्ने स्थानीयको प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक देखिएको छ।
‘मानिस भोज गरिरहेका छन्, रेस्टुरेन्टहरुमा जम्मा भएर सेलिव्रेसन गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलदेखि चिकित्सक, पत्रकार, कर्मचारीले समेत भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोगविनै सामूहिक भेटघाट गरिरहेको पाइन्छ। मलाई समस्या परेकै छैन्, मेरो साथीलाई समस्या परेकै छैन्। त्यसकारण यो मलाई केही फरक पर्दैन् भनेर ‘एसेप्टेन्स’ गरेको देखिन्छ । यो स्विकार्यता सबैभन्दा खतरनाक छ,’ डा. बास्तोला थप्छन्।
डा. बास्तोला संक्रमणको जोखिम घटाउन राज्यको उपस्थिति, अनुमगन तीव्र हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिले त महामारी कतिपयका लागि अनावश्यक मान्छे ओसारेर कमाउने साधन बनेको छ। ट्याक्सीमा कयौं गुणा बढी भाडा लिएर एक ठाउँबाट अर्को गरेर पनि मान्छे काठमाडौ भित्र्याइरहेको पाइन्छ। यो कुरा त रोकिनुपर्छ,’ उनले भने।
अहिले काठमाडौंका कोभिड अस्पतालहरु भरिभराउ छन्। सशस्त्रको बलम्बु अस्पताल, टेकु अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, पाटन अस्पतालमा वेड प्याक छन्।